Taariikhda Oo Soo Jeedineysa In Liverpool Ay Garaaci Doonto Barcelona Ciyaarta Caawa Islamarkaana Ay Hanan Doonto Champions League | Warmaalnews.com
Iyadoo Liverpool ay u safartay Barcelona kulanka lugta hore ee semi-finalka Champions League, tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa aaminsan inay jirto ‘fursad 100% ah’ oo ay kooxdiisa ku dhibtoon doonto ciyaarta caawa iyadoo isku dayaya inay markii labaad oo isku xigta gaaraan finalka Champions League.
Si kastaba, inkastoo Barcelona ay ugu cadcadahay kulanka lugta hore ee ciyaarta caawa hadana taariikhda waxa ay soo jeedineysaa in Liverpool ay guusha gaari doonto.
Taariikhda dheer ee labada kooxood waxa ay iska horyimaadeen afar jeer oo ay ku ciyaareen garoonka Camp Nou, Barcelona marnaba gurigeeda kagama aysan badinin Liverpool.
Xaqiiqdiina, seddex ka mid ah afartaas kulan waxa ay Liverpool ku hogaamiyeen inay gaaraan finalka tartan Yurub ah, iyagoo qaaday labo ka mid ah, waana waxa uu isku dayayo inuu haatan sameeyo tababare Jurgen Klopp.
Kulankii ugu horeeyay waxa uu ahaa 1976 markaasoo kooxdii Liverpool ee uu tababarayay Bob Paisley ay semi-finalka UEFA Cup ka horyimaadeen Barcelona. Kooxdii Barcelona oo uu ka mid ahaa Johan Cruyff oo markaas seddex jeer hantay Ballon d:or waa ay awoodi waayeen inay Liverpool ka celiyaan inay 1-0 kaga badiso gurigooda.